Amisom oo lagu eedeeyay kufsi wadajireed - BBC Somali
Amisom oo lagu eedeeyay kufsi wadajireed
Waxaa soo baxaya eedayn si rasmi ah loogu soo jeediyay ciidamada AMISOM ee xarunta ku lahaa xerada Maslaf ee daafta waqooyiga ee magaalada Muqdisho in askar ka tirsan ay wadajir u kufsadeen haweenay Soomaaliyeed oo Marwo ah.
Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar, oo ah Guddoomiye ku xigeenka guddiga xuquuqul Insaanka, Haweenka iyo arrimaha bini'aadaminimada ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa BBC uga waramay.
AMISOM ayaa sheegtay in ay ka warhayso eedaha loo soo jeediyay ciidamadeeda ku sugan xerada Maslax.
War saxaafadeed ka soo baxay AMISOM, ayaa lagu sheegay in Howlgalka Midowga Africa uu si xoog leh u dhaleeceeynayo dhacdooyinka la xiriira eedaha kufsiga iyo xadgudubyada kale.
Waxay intaas ku dartay in ay ku ad adag yihiin tallaabo ka qaadida arrimaha oo kale, waxaana y ku celiyeen sida AMSIOM ay uga go'an tahay horumarinta amniga dumarka iyo ilaalinta dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Dhinaca Golaha Wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho, ayaa ka dooday eedaha kufsiga iyo hay'adda MSF ee joojisay howlihii ay ka wadday dhamaan Soomaaliya.
Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen Shiino u faahfaahiyay shirka golaha wasiirada.